“Mna Ngokwam Ndiya Kuzifuna Izimvu Zam” (Hezekile 34:11)
Ngaba akho amaxesha amnandi owakhumbulayo ngoxa wawukunye nabantu bakaYehova—iintlanganiso ongasoze uzilibale, indibano eyayimnandi, isiganeko esakonwabisayo entsimini okanye incoko emnandi owakhe wanayo nomnye umKristu? Awukamlibali uYehova; futhi naye akakakulibali. UYehova uyakukhumbula ukumkhonza kwakho ngokuthembeka, ibe ulangazelela ukukunceda ubuyele kuye.
UYehova uthi: “Ndiya kuzifuna izimvu zam ndize ndizinyamekele. Ngokwenyameko yalowo wondla umhlambi wakhe ngemini yokuba ephakathi kwezimvu zakhe ebezisasazeke ngokubanzi, leyo yindlela endiya kuzinyamekela ngayo izimvu zam; yaye ndiya kuzihlangula kuzo zonke iindawo ebezichithachitheke zaya kuzo.”—Hezekile 34:11, 12.